🎣 Kalluumeysiga | Booqo Hultsfred
Dabcan way nuugtaa!
Maalin kaluumaysi aan dabayl lahayn oo ka baxsan biyaha, fallaadhaha qorraxdu way diiran yihiin… hubaal waa kalluunka fiican? Kala duwanaanshaha biyaha kalluumeysiga ee lagu kalluumeysto waa mid aan dhammaad lahayn, kala duwanaanshuhuna aad ayuu ugu weyn yahay degmadayada. Halkan waxaa ah kalluun, pikeperch, pike, carp iyo tench si loo magacaabo dhowr. Soo hel goobta kalluumeysiga ee aad jeceshahay oo dareemo xasilloonida jidhkaaga oo ku faafsanaysa inta aad sugayso mujuruc!
Haro kaluumaysi isboorti oo leh dabeecad haro siman oo ka kooban pike waaweyn iyo kalluunka carp. Hulingen waxay ku taal meel dhexe oo ku xigta agagaarka magaalada Hultsfred. Way ugu fududahay in la helo harada haddii aad
Skärveteån iyo Narrveten
Kalluumeysiga cidlada ee biyaha socda. Baaxadda harada ugu hooseeya Qoto dheer Dhexdhexaad Qoto dheer Noocyada Kalluunka Perch Pike Sutare Benlöja Lake
Oppbjärken waa balli hawadeed oo dhaadheer oo leh nafaqo-xumo iyo biyo nadiif ah. Harada waxay ku taal meel dhowr kiiloomitir bari ka xigta Hultsfred, oo koonfurta ka xigta tuulada Fallhult. Hareeraha
Hooyadu waa mid ka mid ah afarta haro ee Virserums SFK ay kireysato kuna kireysato kalluumeysi. Naadigu wuu iibiyaa
Harada moolka dheer
Djupsjön waa haro yar oo qoto dheer oo kutaala galbeedka Hultsfred. Harada ayaa qeyb ka ah shirkadda FVO ee Stora Hammarsjön. SFK Kroken wuxuu fiirinayaa aagga
Bysjön waxay ku taal meel qiyaastii 15 km koonfur-galbeed ka xigta Hultsfred. Bysjön waa mid kamid ah harooyinka qeyb ka ah Flatens Fiskevårdsområde ee nidaamka biyaha Gårdvedaån. Waad heli doontaa
Stensjön waa haro qurxoon oo nabdoon oo ku taal meel wax yar u jirta qiyaastii 10 km koonfur-galbeed Hultsfred. Waa qayb ka mid ah barnaamijka 'Stove Hammarsjön' ee FVO
Harada ugu weyn ee agagaarka harada weyn ee Hammar - haro qurux badan oo leh kalluumeysi isboorti oo sarreeya iyo fursado horumarineed oo weyn. Stora Hammarsjön waa haro saxara oo dhab ah waana mid yar
Hesjön waa mid ka mid ah ilaa 20 haro oo qeyb ka ah Stora Hammarsjön FVO. Aagga waxaa kireystay oo maamuley SFK Kroken oo ku taal Hultsfred. IN
Alegöl ama Ålegöl, sida uu ku sheegay maabyada, waa biyo qaansoroobaad wanaagsan. Gölen waxay qiyaastii 5 km koonfur ka xigtaa Hultsfred iyo ilaa
Lilla Åkebosjön waxay ku taal waqooyiga Stora Åkebosjön ee Stora Hammarsjön's FVO, harooyinkana waxay ku xiran yihiin qulqulka. Haddii aad galbeed ka tagto Hultsfred
Harada carp leh dabeecad cidla ah. FIIRO GAAR AH: Waxaad ka kalluumeysan kartaa harada adoo xubin ka ah SFK Kroken. Stockebrogöl waxay ku taal bariga bariga Stora Hammarsjön,
Ånglegöl waxay ku taalaa inta udhaxeysa Målilla iyo Virserum, kuna xigta wadada 23. Harada ayaa ka mid ah tusaalayaasha wanaagsan ee sida loo abuuro soojiidasho
Lysegöl waa balli qaab-wareegsan oo kuyaala dhulka howdka ah ee Småland. Gölen waxay ku taalaa koonfurta Virserum isla markaana ku xigta wadada 23. Biyaha waa la tilmaamayaa
Virserumssjön waa haro qoto dheer oo nafaqo-xumo leh oo ku dhegan bulshada Virserum. Harada iyo baadiyaha ayaa qurux badan waxayna leeyihiin wax badan oo ay ku soo bandhigaan dalxiisayaasha agagaarka kalluumeysiga isboortiga,
Emån - Klövdala ilaa Ryningsnäs
Den andra sträckan av Emån. Denna del sträcker sig från Klövdala vid Järnforsen till Ryningsnäs. Ån omges av skogs-och betesmark. Ån är varierande i
Järnsjön waxeey ku taalaa galbeedka Järnforsen waxeeyna soo martaa Emån. Harada ayaa ka mid ah Järnforsen FVO. Waa haro yar oo gacmeed iyo hareeraheeda
Flaten waa haro kalluumeysi isboorti oo caan ah, mana ahan ugu yaraan dalxiisayaasha kalluumeysiga isboortiga shisheeye. Waxay ku taal meel qiyaastii 15 km koonfur-galbeed ka xigta Hultsfred kuna xigta wadada u dhexeysa Målilla iyo
Skiren waa haro yar oo gaabis ah oo qayb ka ah nidaamka biyaha Flatens FVO iyo Gårdvedaån. Flatens FVO waxaa ku jira harooyinka Garpen, Skiren, Övre Vrången,
Övre Vrången waa qeyb kamid ah Flatens Fiskevårdsområde. Harada waxay ku taal waqooyi-bari Virserum. Waa haro hawd ah oo dhirtu ku yartahay mooyee
Gnötteln waa haro biyo-nadiif ah oo nafaqo-xumo ah. Maaddaama harada ay ku taal aag dhul beereed ah, harada waxoogaa aan caadi u ahayn gobolka oo leh biyo nadiif ah.
Emån, Nyboholm ilaa Klövdala